Ninka afgambiga ku qabsaday Suudaan ayaa sheegay in aanu xil dooni-doonin kadib marka la gaadho 2023-ka oo codbixin loo dareero - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Ninka afgambiga ku qabsaday Suudaan ayaa sheegay in aanu xil dooni-doonin kadib...
Ninka afgambiga ku qabsaday Suudaan ayaa sheegay in aanu xil dooni-doonin kadib marka la gaadho 2023-ka oo codbixin loo dareero
Hogaamiyaha ugu sareeya Sudan Gen. Abdel-Fattah Burhaan ayaa ballan qaaday inuusan xil dowladeed u tartami doonin doorashada soo socota ee la qorshaynayo in la qabto July 2023. Waxa uu hadalkan sheegay todobaadyo ka dib markii uu ka takhalusay dawlad ku meel gaadh waddaag ahayad, inkastoo uu la kulmay cambaareeyn & dheleecayn caalami ah.
Hogaamiyaha Militariga Gen. Abdel-Fattah Burhaan, ayaa dhowr jeer oo hore ballan qaaday inuu xilka ku wareejin doono dowlad rayid ah marka la soo doorto mustaqbalka. Si kastaba ha ahaatee, ku dhawaaqistiisu kama hor istaagi doonto jeneraalada kale inay iska dhigaan darajadooda ciidan si ay u noqdaan musharaxiin.
Hogamiyaha ciidamada ayaa muujiyay sida ay uga go’an tahay in si nabad ah loogu gudbo doorasho.
“Waanu ka dhabayn doonaa ballantii aanu qaadnay, ballantii aanu u qaadnay shacbiga iyo beesha caalamka, ee ahayd inay naga go’an tahay dhamaystirka ku-meel-gaadhka, doorashaduna ku qabsoonto xilligii loogu talo-galay, iyo in la ixtiraamo dhammaan hawlaha siyaasadda, inta ay nabadgelyo wax ku socdaan. si firfircoona loo dhawrayo dastuurka iyo u jeedooyinkiisa.”
Ugu yaraan 14 qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa la dilay, ilaa 300 oo qofna waa la dhaawacay, qaar kalena waa lagu barokiciyey mudaaharaadyadii afgambiga lagaga soo horjeeday tan iyo 25kii Oktoobar oo ahayd markii ciidamadu inqilaabka ku qabsadeen awoodda.
“Ciidanka Xoogga dalka ma dilaan shacabkooda, waxaa la sameeyay guddi baadhis samaysa, waxaana ku adkeysaneynaa in wixii dhacay xaqiiqdooda dhabta ah banaanka la keeno, waxaan sheegaynaa in warar been abuur ah lagu faafiyay bulshada dhexdeeda iyadoo lagu qarinayo arrimo ay ka mid yihiin fal dambiyeedka lagula kacay ciidamada qalabka sida. taasoo lagu waxyeelaynayey amniga iyo wadajirka dhuleed ee Suudaan.”
Ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa Axaddii shalay sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay isu soo baxyo badan oo looga soo horjeeday afgambiga, iyadoo dibadbaxyo tiro lihi ka dhaceen magaalooyin dhowr ah, lana soo saasar baaqyo lagu dalbanayo laba maalmood oo kacdoon shacab ah oo looga soo horjeedo la wareegitaanka militarigu la wareegay waddanka bishii hore.
Boqolaal dibadbaxayaal ah oo ka soo horjeeda afgambiga ayaa isugu soo baxay caasimadda Khartoum, sidoo kale waxay isugu soo baxeen magaalada mataanaha la ah ee Omdurman, Wad-Madni oo dhanka koonfureed ka xigta, iyo magaalada waqooyiga ku taalla ee Atbara.
“Maamulka waxaa iska leh shacabka,” ayay ku dhawaaqayeen “maya, maya xukun militari” iyagoo dalbanaya “dawlad rayid ah”.
Previous article18 dead in Niger gold mine collapse
Next articleXog-Tilaabo ay qaaday NISA oo wal wal ku beertay Musharaxiinta iyo Ahlusuna.